ပိုလီနီးရှား, အံ့မခန်းကမ်းခြေများနှင့်အေးဆေးတည်ငြိမ်သောပင်လယ်ထက်အများကြီးပို | Absolut ခရီးသွားခြင်း
ပိုလီနီးရှားသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏anticရာမareaရိယာတွင်ပါဝင်သောအမည်ဖြစ်သည် Oceania။ သို့သော်ကျယ်ပြန့်သောအဓိပ္ပာယ်မှာ, ကနေနေကြပါတယ် ဟာဝိုင်ယီ သို့ အီစတာကျွန်း။ စုစုပေါင်းဤရွေ့ကား, ကျော်ပြန့်နှံ့ကျွန်းစုမြောက်မြားစွာဖြစ်ကြသည် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများပိုင်။
အဆိုပါလွတ်လပ်သောအကြားရှိပါတယ် ဆာမိုအာ, Tuvalu, နယူးဇီလန်, ကိရိဗတီ o Tonga။ အခြားကျွန်းများလည်းသူတို့ပိုင်သည် အမေရိကန် ရန်, ဟာဝိုင်ယီ၏ကဲ့သို့ ပြင်သစ် ခေါ်သံ ပြင်သစ်ပိုလီနီးရှား သို့မဟုတ် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း ကဲ့သို့ pitcairn ကျွန်းများ။ သို့သော်ဤနေရာအားလုံးသည်ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု၊ အံ့သြဖွယ်ရှုခင်းများနှင့်ပါရီစီယယ်ကမ်းခြေများနှင့်မျှဝေသုံးစွဲထားသည်။ ပိုလင်နီးရှားအကြောင်းသင်ပိုမိုသိရှိလိုပါကဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်တိုက်တွန်းပါသည်။
1.1 ဟာဝိုင်ယီ၊ ပိုလီနီးရှားသို့အနောက်ဘက်တံခါးပေါက်
1.2 ကွတ်ကျွန်းများ, စင်ကြယ်သော Polynesian အနှစ်သာရ
1.3 Las Marianas, စပိန်ပိုင်ဟောင်း
1.4 Kiribati, ယခုနှစ်စတင်သောသမ္မတနိုင်ငံ
1.5 ပြင်သစ်ပေါ်လီနီးရှား - ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်သံလိုက်
1.5.3 အီလီနိုက်စ်ကျွန်း, ငါတို့ Polynesia ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုအဆုံးသတ်ရန်
ဟာဝိုင်ယီကမ်းလှမ်းတဲ့အရာအားလုံးကိုမင်းတို့ပြောရရင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ထက်မကလိုအပ်တယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းကိုကျွန်းကိုးကျွန်း၊ ကျွန်းများစွာနှင့်ကျွန်းငယ်များစွာတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Oahu တွင် ၎င်းသည်ပြည်နယ်၏မြို့တော်ဖြစ်သည်။ ဟိုနိုလူလူဒဏ္theာရီပုလဲဆိပ်ကမ်းရေတပ်အခြေစိုက်စခန်းလည်းဖြစ်သည်။ လား စိန်ခေါင်း နှင့် waikiki ကမ်းခြေ ၎င်း၏လူသိများသောနေရာများဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်သင်ကဲ့သို့ရှုခင်းများကဲ့သို့အံ့မခန်းရှုခင်းများသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် မေီ BH Greenwell လူမျိုးစုဥယျာဉ်.
အခြားတစ်ဖက်တွင်, Kauai တွင်အဖြစ်လူသိများ «ဥယျာဉ်ကျွန်း»ကျွန်းစု၏တောင်ဘက်စွန်းဆုံးနှင့်အလှဆုံးဖြစ်သည်။ အစိမ်းရောင်နှင့်ကြွယ်ဝသောသဘာဝနှင့်အတူထိုကဲ့သို့သောနေရာများ နာပါလီကမ်းရိုးတန်း၎င်း၏အထင်ကြီးကမ်းပါး, ဒါမှမဟုတ်အတူ Waimea Grand Canyon.
လည်း Maui တွင် ဟာဝိုင်ယီမှာတွေ့ရမယ် ယခင်ကျွန်းများကဲ့သို့ပင်ဤကျွန်းသည်သင့်အားရှုခင်းအမျိုးမျိုးရှိသည်။ သို့သော်၎င်း၏အံ့မခန်းကမ်းခြေများထွက်မတ်တပ်ရပ်။ နှင့်အညီ, အားလုံးအထက်, လူကြိုက်များ ဟနန်လမ်းမြစ်ရေ၊ တံတားများနှင့်ချောက်ကမ်းပါးများကိုဖြတ်ကျော်။ ၎င်း၏အနောက်မြောက်ပိုင်းကိုဖြတ်သန်းသွားသောကီလိုမီတာတစ်ရာခန့်ရှိသည်။ သင် Maui နေထွက်ကိုလက်လွတ်မသွားသင့် Haleakala မီးတောင်, အထင်ကြီးရွှေတန်ချိန်နှင့်အတူ။
နောက်ဆုံးသင်သွားရမည့်စတုတ္ထကျွန်းသည်တိတိကျကျခေါ်ဝေါ်သောကျွန်းဖြစ်သည် ကျွန်းကြီး။ ဒီတစ်ခါလည်းသင်က Lanzarote ၏တစ်ခုခုသတိပေး သောကြောင့် မီးတောင်အမျိုးသားဥယျာဉ်Kilauea၊ Mauna Kea နှင့် Mauna Loa တို့နှင့်အတူအချို့သည်ချော်ရည်စီးဆင်းမှုကိုထုတ်ပယ်ဆဲဖြစ်သည်။
ကွတ်ကျွန်းများ, စင်ကြယ်သော Polynesian အနှစ်သာရ
ဤကျွန်းစုသည်ဆက်နွှယ်သောပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်သည် နယူးဇီလန်တောင်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းစတုရန်းကီလိုမီတာ ၂ သန်းကျော်ဖြန့်ကျက်နေသောကျွန်းများပါဝင်သည်။
ရိုတန်းဂါ သူ၏အမည်မှာမြို့တော်ဖြစ်သည် Avarua, သင်သည်ထိုမြို့၌ခေတ်သစ်နှင့်အနောက်တိုင်းဝန်းကျင်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းသည်သင်ကဲ့သို့သောနေရာများတွင်ပါလက်နီးရှား၏အနှစ်သာရကိုလည်းပေးထားသည် Punanga Nui စျေးကွက်, ukuleles, sarongs နှင့်ပုံမှန် gastronomy ကြွယ်ဝသော။ ဥပမာအားဖြင့်, marinated ကုန်ကြမ်းငါးသို့မဟုတ် ika ကသေသည် နှင့် taro အရွက်သို့မဟုတ် Rukau.
ကွတ်ကျွန်း၏ဒုတိယအခရီးဆုံးကျွန်းဖြစ်သည် Aituakiထို့အပြင်သန္တာကျောက်တန်းများနှင့်ပရဒိသုကမ်းခြေများဖြင့်ဝန်းရံထားသည့်အတွင်းခန်းရှိလှပသည့်လှပမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ Atiu ၎င်းကိုသန္တာကျောက်တန်းများဖြင့်ဝိုင်းရံထားသည်၊ သို့သော်၎င်းကိုသင်အထင်ကြီးသွားနိုင်သည် Anatakitaki ဂူ နှင့်ထူးဆန်းသောငှက်များကိုစောင့်ရှောက်။
၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်, ကျွန်း သေပြီ ၎င်းသည် Black Rock သို့မဟုတ် Matavera ကဲ့သို့သောဒေသများတွင်ရေငုပ်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ Y မန်ဂါးယား ၎င်းသည်အထူးသဖြင့်အံ့အားသင့်ဖွယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ orography သည်အဆင့်နှစ်ဆင့်ရှိသောသန္တာကျောက်တန်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောကြောင့်footရာမမီးတောင်ကယ်လ်ဒါရာ၏အောက်ခြေတွင်ဖုံးကွယ်ထားသည်။ Rangimotia massif.
Las Marianas, စပိန်ပိုင်ဟောင်း
ဤကျွန်းစုပိုင်ကြောင်းလူတိုင်းမသိကြပါ Espana XNUMX ရာစုအကုန်အထိ။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်သင့်အတွက်အံ့အားသင့်စရာတစ်ခုထက် ပို၍ ရှိသည်။ ဥပမာ၊ Chamorro ဘာသာစကားစပိန်မှအကြီးအတူညီနှင့်အတူ။ တကယ်တော့၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်နာမကိုအမှီဖြစ်ပါတယ် "မာရီယာနို".
Marianas ၏အလှဆုံးဖြစ်နိုင်သည် လမ်းကြောင်းလည်းခေါ် "ငြိမ်းချမ်းသောကျွန်း" သေးငယ်တဲ့ခြံနှင့်သဘာဝအပြည့်အဝက၎င်း၏ပိုင်နက်အဘို့။ သို့သော် ပို၍ နာမည်ကြီးသည် ဆိုင်းပန်ဘယ်မှာလဲ မြိုင်ကြီးငူကမ္ဘာအနှံ့ရှိရေငုပ်သမားများကိုစွဲမက်စေသည့်ရေအောက်ထုံးကျောက်တုံးကြီးဖြစ်သည်။ အဲဒီအစား, Tinian ၎င်းသည်သဘာ ၀ အံ့ဖွယ်ရာများသာမကဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းစွန့်ပစ်ထားသောစစ်တပ်အဆောက်အအုံများကိုလည်းပါသင်ပေးနိုင်သည်
တောင် Marianas ကျွန်းသည်သူတို့၏ဆွဲဆောင်မှုတိုင်အားကျွန်း၏ကျွန်းတွင်ရှိသည် ဂူအမ်ကျွန်း။ ၎င်းသည်သဘာဝသယံဇာတကဲ့သို့သောအံ့ဖွယ်ရာများနေရာဖြစ်သည် Ritidian ပွိုင့်၎င်း၏အံ့မခန်းကမ်းခြေနှင့်အတူ talofofo ကျရောက်ပါတယ်။ ၏နာမည်ကျော်မေ့လျော့ခြင်းမရှိဘဲ Tumon ဂလားပင်လယ်အော် မပါသောအထင်ကြီး Open- ဝေဟင်ပြတိုက် ပစိဖိတ်စစ်ပွဲအမျိုးသားသမိုင်းဝင်ပန်းခြံ.
ဂူအမ်၏မြို့တော်ဖြစ်သည် ခိုးသင်သည်သင်၏တူသောဟစ်စပန်းနစ်ကျန်ကြွင်းရှိရာ မာရိ၏ချိုသောအမည်၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်း BasilicaPlaza de Españaဘေးတွင်အတိအကျတည်ရှိသည်။ သို့သော်၎င်းမြို့သည်လူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံးမြို့ဖြစ်သည် Dededoကျွန်း၏မြောက်ဘက်ရှိသန္တာကျောက်တန်းပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။
အရှေ့မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိသည် ၾသစေတးလ်, ကျွန်းနှင့် atolls အုပ်စုများအများအပြားဖွဲ့စည်းထားသည့်လွတ်လပ်သောတိုင်းပြည်ဖြစ်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအကြားရှိပါတယ် တရာဝါ y Gilbert, Ellice, La Líneaနှင့်Fénixကျွန်းစုများ။ စက္ကန့်နှင့် ပတ်သက်၍ Kiritimati or ခရစ်စမတ်ကျွန်း ၎င်းသည်နှစ်သစ်ကူးပွဲကိုပထမဆုံးကျင်းပသောကမ္ဘာဂြိုဟ်နှင့်ရေငုပ်သမားများနှင့်တံငါသည်များအတွက်စစ်မှန်သောဝတ်ပြုရာနေရာဖြစ်သည်။
ကီရီဘာတီသည်ပိုလီနီးရှားရှိအကောင်းဆုံးနေရာများကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည် ရိုးရာဘဝ။ အဓိကအားဖြင့်လူ ဦး ရေသည်သစ်သားတဲများနှင့်အုန်းသီးများ၊ အထူးသဖြင့်ဝေးလံခေါင်သီသောကျွန်းများသို့လည်ပတ်လျှင်၎င်းကိုသင်မြင်နိုင်ပါသည်။
ဒီစပ်စုတိုင်းပြည်၏မြို့တော်၌တည်ရှိ၏ တောင်ပိုင်း Tarawa, ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာနှင့်အတွင်းပိုင်းဂွအကြားမြေယာတစ် ဦး လက်ရုံးအဖြစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ သူ့နာမည်က Amboအရေးအပါဆုံးမြို့ဖြစ်သော်လည်း Bairikiပါလီမန်သည်ဘယ်မှာရှိသနည်း။
ပြင်သစ်ပေါ်လီနီးရှား - ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်သံလိုက်
ကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြပြီးပြီဖြစ်သော်လည်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများသိကြသောဤဒေသ၏ဒေသကိုပြင်သစ်ပိုလီနီးရှားဟုခေါ်သည်။ ၎င်းကိုကျွန်းပေါင်းတစ်ဆယ့်ရှစ်ဆယ်နှင့်ကျွန်းစုငါးကျွန်းအဖြစ်ဖွဲ့စည်းထားသည့် atolls များစွာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကမင်းကိုစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးတွေကိုပြမယ်။
သင်ပြင်သစ်ပေါ်လီနီးရှားသို့ခရီးသွားသည်ကိုတဟီတီသည်တွေ့ရမည်။ ၎င်းသည်ကျွန်း၏အကြီးဆုံးကျွန်းဖြစ်သည် လူ့အဖွဲ့အစည်းကျွန်းစုအပြန်အလှန်အားဖြင့် Barlovento နှင့် Sotavento ကျွန်းများကိုခွဲခြားထားသည်။ တဟီတီကိုယ်တိုင်အပြင်၊ သီရိ o Mooreaအဆုံးစွန်သောပါဝင်နေစဉ် ဟွာ, tupai သို့မဟုတ်၎င်း၏ခရီးသွား importance ည့်အရေးပါမှုအတွက်လူသိအများဆုံး Bora အဘိဓါန် Bora အဘိဓါန်.
အတိအကျပြောရလျှင်အများအားဖြင့်တဟီတီကျွန်းထက် ပို၍ လည်ပတ်သည်၊ မကြာခဏလမ်းခရီးသို့ထွက်ခွာသွားသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကြီးလေးသောအမှားတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်အားကမ်းလှမ်းရန်များစွာရှိသောကြောင့်တဟီတီကိုသိကျွမ်းရန်ရက်အနည်းငယ်ကြာအောင်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြံပေးပါသည်။
၎င်း၏မြို့တော်ဖြစ်ပါတယ် Papeeteဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုသွားလည်ပတ်နိုင်သည့်အပြင်၊ အဆုံးစွန်သောတို့တွင်အလွန်စပ်စုသည် ပုလဲနှင့်အတူတ။ သို့သော်ကျွန်း၏သက်တောင့်သက်သာခံစားရလိုပါကပိုမိုကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်နိုင်သည် အစားအစာ။ ပိုလီနီးရှားယဉ်ကျေးမှုကိုပိုစုပ်ယူချင်တယ်ဆိုရင်၊ တဟီတီနှင့်၎င်း၏ကျွန်းများပြတိုက်.
ကျွန်း၏အတွင်းပိုင်းကို ဖြတ်၍ လေ့လာရေးခရီးလည်းဖြစ်သည့်ထူးခြားသောရှုခင်းများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည် Papenoo ချိုင့်၏ဗိမာန်တော်မှ ဦး ဆောင်သော ခဟိုတယ်, ကများအတွက်သန့်ရှင်းရာဌာန။ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ထဲက aorai mountကျွန်း၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောရှုခင်းများရှိသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ သင်သည်ကမ်းရိုးတန်းကိုပိုနှစ်သက်ပါကအနောက်မြောက်ဘက်သို့ခရီးထွက်ရမည်၊ တေးသီချင်း နှင့်အားလုံးအထက်, ၏ သီဟသူရကမ္ဘာပေါ်ရှိအထင်ရှားဆုံးလှိုင်းများထဲမှတစ်ခုရှိသည်။
အကယ်၍ သင်သည်ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာကိုစိတ်ဝင်စားလျှင်၊ ခွန် ကျွန်း၏။ သူတို့သည်အနောက်တိုင်းမတိုင်မီကလူ့ယဉ်ကျေးမှုများတွင်အခမ်းအနားရည်ရွယ်ချက်များရှိခဲ့သည့်မြင့်မြတ်သောနေရာများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သံသို့မဟုတ်ကြေးခေတ်၏ဘာသာရေးနေရာများကဲ့သို့ပင်သူတို့သည်ကျောက်တုံးများဖြင့်ခွဲခြားထားသည်ကိုသိလိုသည်။
နောက်ဆုံးတော့အနီးအနားရှိကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်မှာ Moorea သာယာသောအံ့သြဖွယ်ရာများကိုသင်စောင့်မျှော်နေသည်။ တဟီတီမှကူးတို့သင်္ဘောသို့အလွယ်တကူရောက်ရှိနိုင်ပြီးသင်လွဲချော်နိုင်သည် Rotui တောင်ပေါ်လီနီးရှားနိုင်ငံ၏အထင်ရှားဆုံးသောတစ်ခုဖြစ်သည်။ အထင်ကြီးစရာ ပင်လယ်အော်ကိုချက်ပြုတ်ပါ ယင်း၏ကမ်းရိုးတန်းအပေါ်အလွန်ဘုံတွေ့မြင်မဟုတ်သလိုဝေလငါးမျက်မှောက်။
၎င်းတို့သည်ပြင်သစ်ပေါ်လီနီးရှားကျွန်းစုတွင်အကြီးဆုံးသောကျွန်းစုများဖြစ်သည်။ သူတို့ကအုပ်စုဖွဲ့နေကြသည် ဝါရှင်တန်ကျွန်းများ, Las တော်လှန်ရေး နှင့် Mendañaဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ၁၅၅၅ ခုနှစ်တွင်စပိန်လူမျိုးအယ်လ်ဗာရိုဒီမန်ဒါယာကိုမည်သူရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သူမည်သူ့ကိုမဆိုသူတို့အကြွေးတင်နေသည် Mendoza ၏ Marquesas ကျွန်းများ ပီရူး၏ထို့နောက် viceroy ၏ဂုဏ်အသရေ၌တည်၏။
သင်သူတို့ကိုမလည်ပတ်ရင်တောင်သူတို့ဟာအချို့သောဝတ္ထုတွေအတွက်နေရာယူထားတဲ့အတွက်သင့်ကိုသူတို့အကျွမ်းတဝင်ရှိပါလိမ့်မယ် Herman melville နှင့်ပန်းချီဆရာများ၏အနားယူရာအရပ်ဖြစ်ခြင်းသည် Paul gaugin။ ဤကျွန်းများထဲမှအကြီးဆုံးသည် Nuku hivaမြို့တော်ဘယ်မှာလဲ ထိုင်ခုံ.
သို့သော်မာကေးဆပ်စ်သည်ပိုလီနီးရှားရှိအခြားသူများထက်ခရီးသွား success ည့်သည်ပိုနည်းသည်။ ဤကျေးဇူးကြောင့်သူတို့သည်ယနေ့အထိသူတို့၏အပျိုစင်နယ်မြေများစွာကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏သဘောသဘာဝနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဥပမာအားဖြင့်စိမ်းပြာရောင်ရေနေတောက်ပနေသောရေကန်များနှင့်အနည်းငယ်သာသက်ဆိုင်သည်။ Bora အဘိဓါန် Bora အဘိဓါန်။ မာကေးဆပ်ကျွန်းစုများသည်တောင်ထူထပ်သော၊ ကြမ်းတမ်းသောမြေများဖြစ်ပြီးစိမ်းလန်းစိုပြည်သောအသီးအရွက်များနှင့်သဲသောင်ပြင်များအဆုံးသတ်သည့်ကမ်းရိုးတန်းကမ်းပါးများရှိသည်။
ခရီးသွားလုပ်ငန်းအစုံအလင်မရှိခြင်းကြောင့်မာကေးဆပ်ကျွန်းသားများသည်အခြားသောနယ်မြေများထက်၎င်းတို့၏နယ်မြေများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့သည်။ ပိုလီနီးရှားအကောက်ခွန်။ ၎င်းကိုသင်မြင်နိုင်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည် ဟာကာ သို့မဟုတ်ရိုးရာဓလေ့အကများ၊ သို့မှသာသင်သည်သူတို့၏လက်မှုပစ္စည်းများကိုသိပြီးသူတို့၏ရှေးဟောင်းသုတေသနအကြွင်းအကျန်များကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မည်။ အထူးသဖြင့်စပ်စုသည် တီကီ, နှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ကြီးမားသောလူ့ပုံသဏ္statာန် မိုး အီစတာကျွန်းမှ။
နောက်ဆုံး Nuku Hiva မှကီလိုမီတာသုံးဆယ်အကွာတွင်မင်းကျွန်းရှိသည် Ua Pouဘယ်မှာ၎င်း၏အံ့မခန်း basaltic ကော်လံ နက်နဲသောအရာတခုကိုရှုထောင့်ပေးအကြီးအမြင့်၏။
အီလီနိုက်စ်ကျွန်း, ငါတို့ Polynesia ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုအဆုံးသတ်ရန်
ရာပါနူသို့မဟုတ်အီစတာကျွန်းသည်ပေါ်လီနီးရှားရှိလူကြိုက်အများဆုံးခရီးသွားနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဤပထဝီဝင်ofရိယာကိုကျွန်ုပ်တို့၏ခရီးစဉ်ပြီးဆုံးသည်ထက် ပို၍ ကောင်းသောအရာမရှိပါ။
အမေရိကန်တိုက်ကြီးမှကီလိုမီတာ ၄၀၀၀ နီးပါးနှင့်တဟီတီကျွန်းမှပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည် လျှို့ဝှက်ချက်များ ငါတို့ပြောတာ၊ Rapa Nui သူတို့ကိုအားလုံးရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်လူသိများသည် မိုး, လူ့ ဦး ခေါင်းကိုမျိုးပွားသောသူတို့သည်ပိုင်ထိုက်သောရုပ်ပွားတော်။
ယင်း၏ပျောက်ဆုံးနေသောကျွန်းသို့ရှေးခေတ်နေထိုင်သူများရောက်ရှိလာသည့်အခါနှင့်ထိုeffရာမရုပ်ပုံများကိုမည်သို့ဖန်တီးခဲ့သည်ကိုမသိပါ။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကကဲ့သို့သောအခမ်းအနားများခဲ့ကြောင်းလူသိများသည် ငှက်လူ ပြီးတော့သူတို့ကခေါ်တဲ့အရုပ်စာ script ကိုတီထွင်ခဲ့တယ် rongo rongo။ ထို့အပြင်ခန့်မှန်းရသည် မိုး သူတို့သည် ၁၆ ရာစုတွင်တည်ဆောက်ခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။ သို့သော်ကျွန်းတစ်ခုလုံးသည်သူတို့နှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ရပ်ရုံမျှသာမဟုတ်ဘဲများစွာသောလူတို့သည်လဲကျသွားသောကြောင့်လဲလျောင်းနေကြသည်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုကြည့်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာများမှာ rano raraku, တုံဂါရိ o Ahu akivi။ အဆုံးစွန်သောခုနှစ်တွင် effigies လည်းပင်လယ်ကိုကြည့်ခံရခြင်း၏အနည်းကိန်းရှိသည်။
သို့သော်ဤကိန်းဂဏန်းများသည်အီစတာကျွန်းတွင်တစ်ခုတည်းသောဆွဲဆောင်မှုမဟုတ်ချေ။ အခမ်းအနား၏ရွာကိုကြည့်ရှုရန်လည်းသင့်အားအကြံပေးပါသည် Orongoဘုရင်များကိုရွေးချယ်လိုက်သောထူးဆန်းသော petroglyphs များရှိသည်။ အဖိုးတန် Anakena ကမ်းခြေ နှင့်သင်တန်း, Hanga Roaအဘယ်သူ၏အတွက်ကျွန်း၏သေးငယ်တဲ့မြို့တော် သန့်ရှင်းသောလက်ဝါးကပ်တိုင်၏ဘုရားကျောင်း သငျသညျခရစ်ယာန်သူတော်စင်အများအပြားကိန်းဂဏန်းများကိုတွေ့မြင်ပေမယ့်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စတိုင်၌ထွင်းထု မိုး.
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့မှတစ်ဆင့်သင်ကမ်းလှမ်းသောခရီးကိုကျွန်ုပ်တို့အဆုံးသတ်ပါမည် ပိုလီနီးရှား။ အကောင်းဆုံးနေရာအချို့အကြောင်းကိုမင်းတို့ပြောပြထားပြီ။ သို့သော်သင်ကဲ့သို့သောအခြားသူများသို့သင်၏ခရီးကိုသွားရန်လည်းရွေးချယ်နိုင်သည် Tonga ၏နိုငျငံတျောဘယ်မှာတွေ့နိုင်မလဲ Ha'amonga'a ၏ trilitoအဖြစ်လူသိများ "ပေါ်လီနီးရှားကျွန်းစု၏ကျောက်ခေတ်; Tuvaluသူတို့အထူးအားကစားရှိသည်ဘယ်မှာ ငါမင်းကိုတောင့်တတယ်, ဒါမှမဟုတ်လူကြိုက်များသူတွေကို ဖီဂျီကျွန်းများ။ ဒီနေရာတွေကမင်းကိုစိတ်ပျက်စေမှာမဟုတ်ဘူး။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Absolut ခရီးသွားခြင်း » ပိုလီနီးရှား